La-Tee-Nex — Steemit
ထိုအစဉ်က Latinx စီရင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးရဲ့ဝေဖန်မှုရှိခဲ့သည် - လူအတော်များများ Kleenex နဲ့တူ ", La-Tee-NEX" ဟုပြော - ကလွှင့်ဖို့ဘယ်လိုတောင်မှသိပ်မထင်ရှားတဲ့ရဲ့ "@ ။ " အဆိုပါ "x ကို" ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှု permeating ခဲ့ကြကြောင်း LGBTQ နိုင်ငံရေးနှင့်အတူ jibes ။
အခြို့သောအဘို့, Latinx သုံးပြီးအမျိုးသမီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခရစ်စတီးနား Mora ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ, ဘာကလေ, သူတို့ကြောင့်သူမပထမဦးဆုံးလူငယ်များကို အသုံးပြု. ခဲ့တဲ့ကျား, မ-ကြားနေအသုံးအနှုန်းကြောင့်ကြုံတွေ့ပြောပါတယ်ဥပမာ "ဘာသာစကားမှာမွေးရာပါသည့်ဖခင်အုပ်စိုးကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်ငြီးငွေ့။ "
: ခုနှစ်တွင် အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကြောင်းပင်တဦးတည်း - - လက်တင်အမေရိကန်တွေ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျား၏အုပ်စုတစုသို့မဟုတ်တစ်ရောနှောအုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်စပိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအုပ်စု Latinas အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများကိုဤမှာသူတို့တစ်တွေက default နာမ်စားအဖြစ်သူကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ် "ယောက်ျားတွေ" ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှအဖြစ်ရောထွေးအုပ်စုများကိုရည်ညွှန်းမှာ balk ချင်ပါတယ်တူညီသောလမ်း balk စေခြင်းငှါ, အဆိုပါ subtext အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် "gals ။ ": ဒါဟာလူသားရဲ့ကမ္ဘာမှာမယ့်, သင်မင်းသမီးရုံ၌ရှိကြ၏ က။ Latinx "သူတို့" အင်္ဂလိပ်လို "ဟုသူက" သို့မဟုတ် "သူမ" အကြားရွေးချယ်မှုရှောင်အများကြီးအနည်းကိန်းသုံးပြီးလိုပဲလူအုပျစုများအတွက်ကျားသို့မဟုတ်အမည်မသိတစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြရှောင်ရှားရန်တစ်လမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ နှစ်ဦးစလုံးမရေိကကျား, မ rethinking သမျှနယ်နိမိတ်ကအတူပါလာလိမ့်မယ်သောအခါအချိန်အတွက်ရေနွေးငွေ့ရရှိမှုနေကြသည်။ Mora ကြောင်းသင်္ကေတတစ်ခုဣတ္ "a" ကိုအမျိုးအနွယ်တူဖြစ်သောကြောင့်, လူမျိုးစု (လက်တင် / က) အကြောင်းကိုရေးသား Latin သို့မဟုတ် @ အဖြစ်စကားလုံးရေးသားသည့်အခါနှစ်ဦးစလုံးနောက်ဆုံးတွင်အပါအဝင်ကဲ့သို့အတိတ်၌ဤမှောရှောင်ရှားရန်သည်အခြားကြိုးပမ်းမှုများရှိခဲ့ကြပြီမှတ်ချက်ပြု နှင့် "။ " o masculine ဒါပေမယ့်မျဉ်းစောင်းကိုသုံးပြီးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်များ၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကလူတိုင်းအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး (ကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကလုံးဝလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လုံးဝဖြောင့်သော်လည်းကောင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ငြင်းဆန်ရုံများကဲ့သို့) ၏ဒွိအမျိုးအစားသို့ကျရောက်သောအယူအဆကိုငြင်းပယ်။ Non-binary အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်သူတွေကိုမ box ကိုကိုက်ညီသို့မဟုတ်လုပ်ပေးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခံစားချက်များကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်သည်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းကိုခံစားရပေလိမ့်မည်။